Muqdisho: Ciidanka Nabadgelyada Wadooyinka Oo Soo Bandhigay Waxqabadka Sanadkii 2013 – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Munaasabad lagu soo bandhigayay waxqabadka ciidamada iyo qalabka casriga ah Ciidamada nabadgelyada waddooyinka oo ay u adeegsadaan howlahooda ayaa lagu qabtay xarunta ciidamadaasi ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho.
Munaasabada oo lagu qabtay xarrunta Fisho Taraahiko ee degmada Shangaani, ayna ka soo qeyb galeen mas’uuliyiin ka socotay wasaaradda Gaadiidka iyo maamulka Gobolka Banaadir, saraakiil ka socotay ciidamada Booliiska iyo kuwa AMISOM iyo dadweyne aad u farabadan oo u soo daawasho tegay dhoola tusta ciidamada.
Taliyaha ciidanka nabadgelyada waddooyinka Cali Xirsi Barre “Cali Gaab” oo munaasabadda ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay waxyaabahii u qabsoomay sanadkii tegayee 2013, isagoo sheegay in magaalada Muqdisho ay ka hirgeliyeen markii ugu horeysay 22 sano kadib nalalka kala haga gaadiidka ee loo yaqaano samaafaraha.
Taliyaha ciidanka taraafikada, Cali Xirsi Barre ayaa wuxuu sheegay sanadkii la soo dhaafay ee 2013, ay ka dhaceen wadooyinka magaalada Muqdisho 1026 shilal gaari ah kuwaasoo geestay qasaaro dhimasho iyo dhaawac intuba leh.
Taliyaha ayaa warbixintiisa wuxuu ku sheegay dhimashada shilalkaasi ay geesteen ilaa sanadkii hore inay yihiin 65 qof halka dhaawacana uu gaarayo 152.
Cali Gaab ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in sanadkan Cusub ee 2014 ay ciidamadu ku talaabsan doonaan horumarro ka badan kii sanadkii tegay, wuxuuna ugu baaqay gaadiidleyda iyo bulshada inteeda kale iney la shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada waddooyinka.
Warsame Max’ed Xasan ( Warsame Joodax ), Guddoomiye Ku xigeenka dhanka Amniga ee Maamulka Gobolka Banaadir oo ka qeyb galayay Munaasabadaas lagu Maamusayay Waxqabadkii Sanadkii la soo dhaafay Ciidanka Taraafikada Soomaaliyeed ayaa waxa uu kula dar daarmay in Ciidanka Nabad Gelyada waddooyinka ay si hufan u gatan Howlaha shaqo ee ay Mausuul uga yihiin Umadooda iyo dowladda intaba.
Guddoomiye Ku xigeenka ayaa sheegay in Ciidanka Nabad Gelyda waddooyinka y yihiin Kuwa howl wacan u haya Bulshada Soomaaliyeed sidaa daraadeed loo baahan yahay in ay sii dar dar geliyaan Howlahooda shaqo.
Mudane Joodax ayaa dhanka kale ugu baaqay in ay Xadeeyaan Taraafikadu Gaadiidka Isticmaala wadooyinka si ay u yaraadaan shilalka xilliyada qaar ka dhaca wadddooyinka.
Si kastaba Taliska Ciidanka Taraafikada ayaa Maalmihii dambe waday dadaallo ay ku hormarinayaan howlahooda shaqo iyadoo wadooyinka qaar lagu arkayo haatan Astaamaha Samaafaraha ee kala jiheeya gaadiidka iyo dadweynaha taas oo ay aad u soo dhaweeyeen Shacabka Muqdisho.